23/10/2010 - Vondrona Kristianina : « tonga ny fotoana … »(+Vidéo)
“Tonga ny fotoana” hoy ny Vondrona Kristianina “hamerenana ny firenena hoy toy ilay Jerosalema teo aloha”. Nambaran’ireto laika mivondrona ireto fa maro loatra ny mariky ny fahasimbana eto Madagasikara koa, toy ny tamin’ny andron’i Zakaria mpaminany, dia maniraka ny olony Andrimanitra hampita hafatra mba hamerenana ilay Madagasikara Mankato an’ila Nahary. Nanentana izay mahatsiaro tena fa Malagasy mino an’Andriamanitra rehetra izy ireo handray ny andraikitra tandrify azy any amin’ny fiaraha-monina hanentana amin’ny fanarenana ny tanindrazana. Nandritry ny fotoam-bavaka lehibe no nanazavan’ny Vondrona Kristianina ny momba ny fikambanana. Nambaran’izy ireo ary fa laïka no ao anatin’ny vondrona ary manampy amin’ny fandrindrana kosa ireo mpitondra fivavahana miaraka amin’izy ireo. Teo am-pamaranana dia nampitondra hafatra amin’ny mpiray tanindrazana izy ireo. “Tonga ny fotoana ka na ho dorana aza izany dia adidin’ny irak’Andriamanitra ny mampita ny hafatra”.
Sary Vondrona Kristianina
FANAMBARANA_VONDRONA_KRISTIANINA.pdf 625.12 Ko
15/10/2010 - Notsipahin'ny SMM ny sosokevitr'i TGV
Nanatanteraka fivoriam-be androany ireo mpitsara mivondrona ao amin'ny SMM. Nodinihana tamin'izany ny tolo-kevitra naroson'ny Filohan'ny FATE. Ity farany moa dia nanome toky fa amin'ny Repoblika fahaefatra dia omena fahafaham-po ireto mpitsara ireto. Raha tsiahivina dia mitaky ny fanomezana azy ireo ny atao hoe "indemnité liée à la fonction de juger" mba hanomezan-danjana ny fitsarana Malagasy sy hampihenana ny kolikoly mila ho tandra vadikoditra amin'ity sehatr'asa ity.
Efa nisy mpikambana tao amin'ny biraon'ity sindikan'ny mpitsara ity nosamborin'ny FIS tany Toamasina herinandro lasa izay ary notanany tamin'ny toerana tsy fantatra nandritry ny ora dimy. Taorian'izay no nanatanterahana ny fihaoana tamin'ireo mpitsara sy i Andry Rajoelina ary nampiandrasan'ity farany amin'ny repoblika fahaefatra ny valin-kasasaran'ireo mpitsara.
Takian'ireo mpitsara ihany koa ankehitriny ny fanitsiana ny lalàm-panorenana. araky ny nambaran'izy ireo dia niova tanteraka ny rijan-teny nalefa tany amin'ny filan-kevitra nanomana ny lalàm-panorenana ka tsy nanome lanja ny fahaleovan-tenan'ny fitsarana. "Maika io fanintsiana" hoy ny mpikambana ao amin'ny SMM "mba ialana amin'ny olana any aoriana".
08/10/2010 - Grevy SECES- tsy manana vahaolana ny Fate dia manala baraka sisa(+Vidéos)
Hitohy ary vao miha hihamafy ny grevy ataon’ireo mpampianatra mpikaroka eny Ankatso. Fanalana baraka mantsy no setrin’ny fangatahana nataon’izy ireo, hany ka tsy manaiky izy ireo.
"Hihevitra ny hanao hetsika mahery vaika mihitsy izahay” hoy ny filohan’ny SECES eto Antananarivo, Isabelle Andrianjoany. Hanao fivoriana izy ireo ny Alatsinainy izao handinika izay ho avin’ny hetsika. Mitohy aloha hatreto ny tsy fampianarana amin’ireo fakiolté maro. Fantatra ihany koa fa dia mihombom-peo amin’izy ireo ny avy any amin’ny faritra.
Raha ny fanazavana fanampiny dia “fampanantenana poak’aty hatrany no azon’izy ireo”. Raha mikasika ny teti-bolan’ny Oniversite de tsy ny ampahafolon’ny vola akory no azo. Raha 3,5 miliara Ariary no tokony hampandehanana ny raharaha rehetra dia 216 tapitrisa Ariary monja no azo. Tafiditra anatin’io ny resaka vatsim-pianarana, ny karaman’ny Pat ary ny fampandehanana ny raharaha amin’ny ankapobeny eny amin’ny anjery manontolo. Ny taom-pianarana anefa tokony ho tapitra amin’ny volana Novambra, ny akamaroan’ireo sampam-pampianarana tsy nisy nahavita ny fianarana ary tsy nanomboka akory ny fanadinana.